शान्त पड़ोस, वा घर कसरी साथी बनाउने?
हरेक घरमा तिनको आत्मा, ऊर्जाको रक्षक र स्वामी हुनुपर्छ - घरको गार्ड। आफ्नो चरित्र र आवासमा हुने स्थितिको आधारमा यो घरको मनोभावले यो असम्भव हुन सक्छ कि मान्छेहरूले महसुस गर्नेछन् कि त्यहाँ कुनै पनि छैन। वा शायद यो उपाध्यक्ष हो - शोर, अचानक हानि, सानो गन्दा चालक र अन्य उपलब्ध माध्यमहरू देखाउन को लागी। यस इकाईको स्थान प्राप्त गर्नको लागि, तपाईंलाई ब्राउनीको साथी कसरी बनाउने भनेर जान्न आवश्यक छ, र त्यसपछि यी सम्बन्धहरू कायम राख्नुहोस्।
भूरी को हो?
घरको यी स्वामीहरूले अशुद्ध आत्माहरूको पङ्क्तिसँग सम्बन्धित छैनन्, तिनीहरू प्रकृतिको उत्पादन हुन्, यसको गहिरो शक्ति र गुप्त ऊर्जा। यसैले पूजाहारीहरू, प्रार्थनाहरू, प्रतीकहरू वा पानी छिटोको साथमा यस्तो छिमेकीलाई चलाउन प्रयास गर्दै - पाठ खाली र हानिकारक छ। केही व्यक्तिहरूले वैध क्षेत्रबाट बाँच्नको प्रयास गर्दा यसलाई मनपर्छ। यदि तपाईं कसरी ब्राउनीको साथ साथी बनाउन कसरी रुचि राख्नुहुन्छ, त्यसपछि सुरु गर्न पहिलो कुरा - तपाईंको नजिकै बस्नको लागि आफ्नो अधिकारलाई पहिचान गर्नुहोस्। उसलाई आदरको साथ व्यवहार गर्नुहोस्, किनकि यो हामी मनुष्यहरू गर्न सक्दैनौं - यसको कार्यमा। यो एक ऊर्जा इकाई हो किनभने, परिवारको वातावरण र सम्बन्धमा उहाँसँग सीधा प्रभाव छ। त्यहाँ शान्ति र दया कहाँ छ, उहाँ सामान्यतया आफैले धेरै देखाउनुहुन्न, र यदि उहाँले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ, यो केवल घर को राम्रो लागि हो। उदाहरणका लागि, केहि कुराको बारेमा चेतावनी दिन वा घरबाट अतिथिहरूलाई हटाउन, क्रोध, ईर्ष्या वा खराब विचारहरू संग आउन सक्छ। तर ती परिवारहरूमा जहाँ तिनीहरू निरन्तर झगडा गर्छन्, घोटाला, पिउने, घर-रक्षकहरूको कार्यहरू निरन्तर रूपमा पत्ता लगाइनेछन्। यस आत्माले मानिसहरू र भूमिको ऊर्जाको एक प्रकारको सिम्बायोसिसको कारणले गर्दा यो सामान्यतया अरु घरहरूमा वा निचो फर्शमा स्थित अपार्टमेन्टमा बसाइन्छ। तेस्रो तल्ला माथि, त्यस्ता स्वामीहरू दुर्लभ हुन्छन्। यो रोचक छ कि तिनीहरू जन्मेका छन् (वा उठ्छ) ती पुराना छन्, र बढ्दै - साना हुदैछ र गायब हुन्छ, जसको अर्थ फरक, उच्च स्तरको अस्तित्वमा परिणत हुन्छ।
त्यसोभए साथीहरू कसरी ब्राउनको साथ बनाउनुहुन्छ? उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिलाई संचार र ध्यानलाई माया गर्छन्, यद्यपि कहिलेकाहीं कहिलेकाहीँ उनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा यद्यपि अचम्म मानसिक हुन्छ। र यो केवल आशा को आशा मा मत करो, अचानक एक पुरानो हानि थियो भने उहाँलाई धन्यवाद, कक्रोच या चूहों बिना बिना कुनै घर छोडेर विशेष गरी फूलहरु बढ्न थाले। आफ्नो अदृश्य सहायकलाई पुष्प र मिठाईसँग व्यवहार गर्नुहोस्, उहाँले धेरैलाई पनि उनीहरूको प्रशंसा गर्छन्। निस्सन्देह, त्यो आत्माले भौतिक खाना चाहिँदैन, तर ब्राउनले कसरी साथी बनाउन कसरी सम्बोधन गर्ने, पक्षबाट यस्ता उपहारहरू मालकिनहरू आदर, हेरचाह र कृतज्ञताको प्रतीक हुन्। उनीहरूको भलाइको लागि छोडिदिनु, तिनीहरूलाई राख्नुहोस् कि तिनीहरू पादरी वा बच्चाहरू पाउँदैनन्। चुपचाप खाना नछोड्नुहोस्, घरधनीलाई दोहोर्याउनु पर्ने शब्दहरू बोल्नुहोस् र उपहारलाई स्वाद दिन दिनुहोस्। र तिनीहरू पनि खेलहरूको लागि खोजी गर्छन्, र त्यसैले घरले ट्रिंकटहरू र अन्य वस्तुहरू गुमाउँदैन, तपाईंको छिमेकीको लागि एक बक्सको मज्जा बटुल्न। यो अप्रचलित गहना, सुन्दर बटन, मोती, सिक्का हुन सक्छ। यस्तो बक्स बिना आवरण हुनु पर्छ। त्यो, भोजन जस्तै, बिशेष स्थानमा लिन आवश्यक छ, घरलाई बुझ्न को लागी यो सबैको लागि यो उद्देश्य हो, र तपाईं चम्मच संग गर्न सक्छन् जब उसले मन पर्छ।
सबैजना जो ब्राउनीलाई साथी बनाउन कसरी चासो राख्नुहुन्छ उनी जान्छ कि जान्छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूको अनुसार, विकास सामान्यतया सानो छ, 0.5 मिटर भन्दा बढी। यसले आवासको मालिकको छवि, कम भू-भाग को लागी लिन सक्दछ, र फर फर, एक बूढी मान्छे वा बिरालोको रूपमा देखा पर्न सक्दछ। उत्तीर्ण संग, धेरै धेरै अनुकूल छ, को रूप मा धेरै चित्रहरु द्वारा प्रमाणित। साथै, गृहस्थकर्ताको भौतिक खोलले गहिरो विकास गरिसकेपछि यसको उपस्थिति प्रकट हुन्छ वायु उतार-चढ़ाव, बन्द सन्झ्यालसँग ड्राफ्ट। तथापि, सबै ध्यान दिनुहोस् कि यो प्राणी संग कुनै नजिकको सम्पर्क संग, मानव शरीर त्रसित हुन्छ, यो उत्प्रेरित हुन्छ, उत्तेजक टाउको र टाउको। के म घरमा एक घर के हो भनेर रेकर्ड गर्न सक्दिन ? फोटाहरू, यदि उनीहरूलाई केही गोली हान्न व्यवस्थित भए तापनि ती अस्पष्ट र अपमानजनक छन् कि उनीहरूमा "फोटो चित्र" रचना गर्न सम्भव छ। र आफैलाई सोच्नुहोस्, कसरी तपाईं ऊर्जाको क्लट कैद गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं कि प्रायः यो फारममा छ कि अदृश्य घर छ। लोक शिल्पकार र शिल्पकारहरूले बनाएको तस्वीरहरू, उहाँलाई दयालु दादाको रूपमा चित्रण गर्दछ, एक बिरालोको कम्पनीमा स्टोभमा बस्छ। कहिलेकाहिँ उसले केहि गरिरहेको छ वा केहि चीजको मरम्मत गर्दैछ। अनि निस्सन्देह, यो रातमा दौड्छ, घरमा नदेखाइन्छ। यसको लागि अझ बढी बानी भ्रमणहरू आफैले भ्रमण नगर्ने, तर काम गरेर। उहाँले रातमा एक व्यक्तिको घरमा आउन सक्नुहुन्छ, घरको समस्याहरू सुल्झाउन वा, यसको विपरीत, हस्तक्षेप गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ अदृश्य मालिकले घर छोडेर व्यक्तिलाई रोक्न खोज्ने कुञ्जी लुकाउँछ, यदि यात्राले नकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ वा सडकमा आपत्तिजनक हुनेछ।
के तिनीहरू वास्तविक घर कार्टून क्यारेक्टरसँग कुनै सामान्यमा छन्? सायद, हाँ। तिनीहरूका सबै विशेषताहरू र बानीहरूसँग यो एक निश्चित सामूहिक छवि प्रतिबिम्बित गर्दछ। अन्तमा, परी कथाहरू वास्तविकताको प्रतिबिम्ब हुन्।
उनको महिमा द डायमण्ड: स्टोन गुण, पहने नियम र अन्य उपयोगी जानकारी
Bozena - केटीको लागि नामको अर्थ
दूध सूत्र बच्चाहरु को लागि "Similac"
जर्मनी मा पार्किंसंस रोग उपचार
तपाईं के कीव देखि एक केटा-एक कमाल गरे, र चाल म्याजिस्ट्रेटको Preticha के थियो थाहा छ?
सोभियत ट्यांक टी-150: अवलोकन
हेस्टिंग्स को लडाई (छोटो)
बैक्टीरिया कसरी अनुकूल र अनुचित परिस्थितिमा गुणा गर्नुहुन्छ?